Igumbi elihle kwindawo entle enegaraji
Igumbi lakho lokulala e iflethi eqeshisayo sinombuki zindwendwe onguElaine
Igumbi elinebhedi enye, i-mattress ekhululekile yasentwasahlobo (kunye ne-mattress eyongezelelweyo kwisiseko), idesksi kunye ne-closet evulekileyo, ehlala kwindawo enkulu, ukuthutha emnyango, indawo yokupaka iimoto. Jonga eBanhado (ikhadi leposi lesixeko).
Igumbi lokuhlambela ekwabelwana ngalo kunye nezinye iindwendwe ze-airbnb, kodwa ngokunokwenzeka ukuba ngasese (ukuba akukho ndwendwe kwelinye igumbi, akukho mntu uya kusebenzisa igumbi lokuhlambela, njengoko ndine-suite).
Ilungele abo beza esixekweni ngenxa yomsebenzi, kodwa banokubamba isibini
Igumbi lokulala elinebhedi enye, umatrasi okhululekileyo wasentwasahlobo (nomandlalo owongezelelweyo kwisiseko) kunye nedesika. Jonga eBanhado (ikhadi leposi lesixeko).
Ilungele abo beza esixekweni ngenxa yomsebenzi, kodwa banokubamba isibini.
ibhedi elala umntu omnye eyi-1, imatrasi ebekwa phantsi eyi-1
4.90 ·Izimvo eziyi-72
4.90 · Izimvo eziyi-72
Indawo enkulu yentsapho, ejikelezwe yimimandla ehloniphekileyo yesixeko (Jd. Aquárius, Jd Alvorada, Colinas). Iibhari ezininzi ezikumgangatho ophezulu kunye neendawo zokutyela. Ivenkile enkulu engaphantsi kwemizuzu emi-5 ngemoto (iSpani) kunye nezincinci ebumelwaneni (kwiivenkile ezinkulu zaseDois Dia). Ukufikelela ngokulula kumbindi wedolophu kunye neColinas mall (iicinema, iindawo zokutyela, iivenkile eziphezulu).
Kwindlela enye nefektri yaseJohnson & Johnson.
Ubumelwane obukufutshane nesixeko saseJacareí kunye neYunivesithi yaseUNIP
Ubumelwane bunqunyulwe yindlela entle yebhayisekile.
Ndiyakuthanda ukonwaba neendwendwe, kodwa ndiyaqonda ukuba baninzi abantu abeza nje ngomsebenzi/ukufunda kwaye bafuna nje indawo yokulala etofotofo nekhuselekileyo, ngoko ke ndinentlonipho enkulu kubumfihlo bomntu ngamnye.
Umququzeleli wefowuni kaLuana/whatsapp: +55 12 98192-4143
Ndiyakuthanda ukonwaba neendwendwe, kodwa ndiyaqonda ukuba baninzi abantu abeza nje ngomsebenzi/ukufunda kwaye bafuna nje indawo yokulala etofotofo nekhuselekileyo, ngoko ke ndinen…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- São José dos Campos